တိုက်တန်းနစ်ရဲ့ နောက်ကွယ်က လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းများ
တစ်ချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ TITANIC သင်္ဘောကြီးနစ်မြုပ်ခြင်းမှာ လူသိနည်းတဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းလေးတွေပါ...။ ၂၀ရာစုနှစ်စောပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အရမ်းကိုကျော်ကြားတဲ့အမှုအခင်းတစ်ခုကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ တလောက စိတ်ကူးပေါ်လာမိပါတယ်..။ ထိုအကြောင်းအရာကတော့ တိုက်တန်းနစ်ပါပဲ။ တိုက်တန်းနစ်သင်္ဘောကြီး ဘာကြောင့်မြုပ်နစ်သွားရတာလဲ။ ကမ္ဘာမှာအခမ်းနား အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ခရီးသည်တင်ယာဉ်သင်္ဘောကြီးတိုက်တန်းနစ်ဟာ ဘာအကြောင်းကြောင့် ပင်လယ်အောက်ကို...
အလောင်းမင်းတရားကြီးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအချက်များ
အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ၏ အမူအရာ အကျဉ်းချုပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁။ စကားနည်း၍ ပြောသောအခါ ပီပြင်လေးနက်ပြီးလျှင်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၂။ ခန့်ငြားသောဣန္ဒြေရှိ၍၊မျက်နှာထားမဆိုးသော်လည်း ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်ရွှင်ခြင်းမရှိ။ ၃။ အလုပ်တစ်ခုကို မလုပ်မီစဉ်းစား၍၊ လုပ်သောအခါ မအောင်မြင်သော အလုပ်မရှိခဲ့လေ။ ၄။...
အောင်မြင်ရေးအတွက် ဦးသန့်ပြောတဲ့ မှတ်သားဖွယ် “စကားငါးခွန်း”
Via : Ashin Kelasa ဘုန်းကြီး ရဟန်း ၃-ဝါရ ရွာကို ပြန်စဉ် အဖိုး ရဟန်းလူထွက် ဆရာကြီး ဦးစာရိန္ဒ သိမ်းထားသော ကြီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်း (အတွဲ၊ အမှတ်နဲ့ ခုနှစ်များကို မရေးထားမိ) ထဲက...
ကျွန်တော်တို့အများစုသိကြတာကတော့ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ တရုတ်က မဟာရံတံတိုင်းကြီး ၊ ဂျော်ဒန်က ပီထရာ ၊ ဘရာဇီးက ခရစ်တော်ရုပ်တု Christ the Redeemer ၊ ပီရူးက အင်ကာမြို့တော် မာချူးပီချူး ၊ မက္ကဆီကိုက မာယာမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့...
ဒီလမ်းကတော့ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်ပြီးတည်ဆောက်ထားတယ်လို့လူသိများတဲ့ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာဖြတ်လမ်း(Atlantic Ocean Road) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရှည် ၅.၂မိုင်ရှိတဲ့ ဒီလမ်းဟာ နော်ဝေးပင်မကုန်းမြေကနေ Averøy ကျွန်း ၊ Romsdalshalvøya ကျွန်းဆွယ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့လမ်း(တံတား)ဖြစ်ပါတယ်။ နော်ဝေးစကားနဲ့ ဆိုရင်တော့ Atlanterhavsveien လို့ခေါ်ပါတယ်။ လမ်းအစအဆုံးမြို့နှစ်မြို့ကတော့...
ဖတ်ရှု့သင့်တဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က ပုံပြင်တိုလေး ၃ပုဒ်
(၁) တစ်ခါက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဟာ သားတော်(၁ဝ)ပါးထဲကနေ အမွေဆက်ဆံသူတစ်ယောက်ကိုရွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဘုရင်ကြီးဟာ ပညာရှိမှူးမတ်တစ်ဦးနဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားတိုင်ပင်ပြီး လမ်းဘေးဝဲယာမှာရေရှိတဲ့ လမ်းတစ်ခုပေါ် ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးကို ချထားလိုက်တယ်။ အဲဒီလမ်းပေါ်ဖြတ်လျှောက်သူတိုင်းဟာ ကျောက်တုံးပေါ် ကျော်တက်မလား! ကျောက်တုံးကို ဘေးဖယ်မလား! ကျောက်တုံးကို ကွေ့ပတ်မလား!...
စားသောက် နေတုန်း ယင်အုံ လာရင် အရသာ ပျက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ယင် အုချ သွားရင် ရောဂါ ဘယလည်း ပျံ့နှံ့နိုင်သေး။ လွယ်လွယ် ကူကူ နည်းလမ်းလေး တစ်ခုကို Funzug က အကြံပြု ထားပါတယ်။...
ရောမအင်ပါယာကို တည်ထောင်သူ ဩဂတ်စတက်ဆီဇာ ( Augustus Caesar) (ဘီစီ ၆၃-အေဒီ ၁၄) အား သမိုင်းတွင် ဘက်စုံတော်သည့် ပညာရှင်အဖြစ်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သူအစပျိုးလိုက်သည့် ရောမအင်ပါယာသည် နှစ်၂၀၀ ခန့်ကာလအတွင်း အင်အားကြီးခြင်း၊ ကြွယ်ဝခြင်း၊ တန်ခိုးကျော်ဇောခြင်း၊...
သိုးကျောင်းသမ ဘဝမှ နှစ်ပေါင်း ၂၀ကြာပြီးနောက် နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သူ
လူတိုင်းလိုလိုဟာ အိပ်မက်အကြီးကြီးတွေ ဆန္ဒအကြီးကြီးတွေထားရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူအနည်းငယ်ကသာ သူတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ကျန်တဲ့သူပေါင်းများစွာကတော့ အိပ်မက်မက်ရင်းနဲ့ပဲ ဘဝကို ကုန်ဆုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို သူတို့ရည်မှန်းချက်ကို မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့လူအနည်းငယ်ထဲမှာ မော်ရိုကိုက သိုးကျောင်းသမလေး Najat Belkacem(နာဂျက် ဘတ်ကာဆမ်)...
Page 211 of 233 Prev 1 … 210 211 212 … 233 Next